Ogaden News Agency (ONA) – Warbixin: Shirweyne lagu doortay maamul Cusub Jaaliyada sweden
Posted by ONA Admin	/ December 30, 2012
Maalinimadii Sabtida ee ay taariikhdu ku beegnayd 29-12-2012 ayaa jaaliyada S/Ogadenia ee dalka Sweden waxay isugu yimaadeen dhamaan bulshada qaybaheeda kala duwan, sida Ururka Haweenka Ururka Dhalin yarada (OYSU) & Jaaliyada guud kulan aad u baladhaan oo ay marti galisay jaaliyada magaalada Hallasthammar.
Kulankan oo wajiya badan xambaarsanaa kana soo qayb galeen dhamaan laamaha jaaliyada oo ka koobnaa ilaa 8 farac ayaa bilowday abaarahii 2:00pm duhurnimo
Shirka waxaa furay gudoomiyaha jaaliyada Sweden Mudane Abdinasir Mahamed (Gadhweyne) ayaa codbaahiyaha kusoo dhaweeyay halgame Sh C/laahi Mu’adin isla mar ahaantana Sheikha ayaa madasha kasoo jeediyay muxaadaro ku saabsan arimaha jihaadka & wax yaalaha uu qofka muslimka ah karaamada ku leeyahay, Sh C/laahi ayaa aad ugu nuuxnuuxsaday halganka ogadenia & xaqnimadiisa & walibana sida uu cid walba oo muslim ah waajib ugu yahay.
Kadib waxaa qudbad gaaban oo baraarujin ah oo uu ku wacyi galinayo xubnaha halkaas kasoo jeediyay Halgame C/qadir Xuseen ( Gama’diid).
Sidoo kale Halgame Mahamed Khadar ayaa soo bandhigay siminaanr lawada jeclaystay oo uu ku qiimaynayay maamulka toolmoon, asagoo diirada saarayay siyaabaha maamul guul ku gaadhi karo & wax yaalaha hawlahooda fashil ku keeni kara.
Kadib waxaa laguda galay ahmiyadii shirka oo ahayd maamulka jaaliyada sweden oo xilka ku wareejinayay maamulkii 2-da sanno ee soo socda hogaamin lahaa Jaaliyada Sweden.
Mudane Abdinasir Mohamed (Gadhweyne) oo ahaa guduumiyaha jaaliyada ee xilka wareejinayay ayaa ka warbixiyay wax qabadkii jaaliyada & siyaalihii ay guulaha ku gaadheen, halgame Abdinasir Gadhweeyne oo warbixin qoto dheer goobta ka jeediyay ayaa si qurux badan xilki & sii daadihintii shirka ugu wareejiyay gudigii doorashada asaga & maamulkii la shaqaynayayba, u balana qaaday inay sifiican ula shaqayn doonaan maamulka cusub ee la dooran doono.
Waxaa shirkii lawareegay gudiga doorasha oo ka koobnaa 3 qof oo kala ahaaa Halgame Nuradin Sh Jaylani, Halgame Asad Yusuf & Halganto Ayan Ali Haidar. Gudida ayaa xubnaha usoo bandhigay qaabkay musharaxiinta xilka jaaliyada usoo xuleen & sababaha ay ku dooranayeen xubinka musharaxa ah.
Maamulka cusub oo ka koobnaa ( 8 ) masuul oo uu gudoomiye u yahay Halgame Haybe Mahmud Abdi ayaa ka codsaday xubnaha inay gacan weeyn ka gaystaan lashaqaynta maamulka cusub.
Halkaasi waxaa si habsamiya loogu guulaystay inay doorashadii jaaliyada Sweden u dhacday si dimoqraadiya aadna ugu qanacsanaayeen dhamaan (8-dii ) farac ee kasoo qayb gashay doorashada.
Halgame Mudane Riyale Xaamud oo looga bartay xigmad & dhiira galin ayaa dardaaran siiyay maamulkii cusbaa ee la doortay. Waxaa kale oo mudane Riyaale wacyigalin siiyay xubnaha Jaaliyada isaga dardaaran iyo guubaabo xoogan siiyay. Mudane Riyaale halkaas waxa uu kusoo gabagabeeyay shirkii oo si guul ah bilow ilaa dhamaad si nidaamsan ku socday.
Kadib waxaa laguda galay barnaamij lagusoo bandhigayay ciyaaraha hidaha & dhaqanka Ogadenia sida Dhaantada oo ay qabanqaabiyeen jaaliyada shirka marti galisay ee Hallasthammar.
Iskusoo wada duuboo barnaamijkii sadex geeslaha ahaa ee ka koobnaa warbixintii wax qabadka jaaliyada 2-dii sanee lasoo dhaafay, doorashadii maamulka cusub ee hogaaminlahaa jaaliyada sweden 2-da sanno soo socota & bandhig faneedkii hidaha & dhaqanka ogadenia ayaa 10:00pm fiidnimo waxuu kusoo gabagaboobay si habsamiya, jawi farxadeed & walibana rayn rayn.